Hadal kooban ee kasoo baxay Zidane oo go’aamin kara mustaqbalka xidig ka tirsan Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 25 Maarso 2019. Macalinka kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa ka hadlay go’aankiisa kaga aadan bixitaanka mid ka mid ah xidigaha uu ku heysto garoonka Santiago Bernabéu xiliyada soo aadan.
Marco Asensio ayaa lala xiriirinayaa inuu xiiseenayo ka tagista kooxda Real Madrid, si uu ugu biiro Liverpool, ama kooxaha kale yurub ka dhisan ee xiiseenaya saxiixiisa.
Yeelkadeeda, wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa sheegay in Zidane uu beeniyay wararka ku aadan in Marco Asensio uu ka tagayo kooxda Real Madrid xili ciyaareedka soo aadan.
Macalinka reer France ee Zinedine Zidane oo si kooban kaga hadlay arintan ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan la hadlay Asensio waxaana u sheegay inuu muhim u noqon doono kooxda, waxaan doonayaa inuu halkaan nala joogo”.
Si kastaba warar soo baxay ayaa waxay tilmaameem in maamulka sare ee kooxda Real Madrid ay albaabada u fureen bixitaanka Marco Asensio, si looga helo dhaqaalo ay ku sameyn karaan saxiixyo cusub ee si weyn kooxda u caawin kara.
Umtiti oo ka hadlay heshiiska la filayo in Griezmann uu ugu dhaqaaqo kooxda Barcelona